သိုင်းပြောင်းပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သိုင်းပြောင်းပြန်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Sep 10, 2013 in Education | 32 comments
စံတော်ဝင် သမီးငယ်များသို့ …
မိထွေးတော် ဂေါတမီ သားတော် ဘုရားအားလျှောက်ထားခဲ့၏။ သားတော်ဘုရား .. သားတော်ဘုရား၏ ချိုမြိန် ကောင်းမြတ်လှ၊ စိတ်နှလုံးကို ချမ်းမြေ့စေတတ်သော ကိလေသာ အညစ်အကြေး ကင်းဝေး၍ လောကုတ် လောကီ နှစ်လီပွားတိုး၊ အကျိုးများစေမည့် သားတော်ဟောပြ မြတ်ဓမ္မများကို နာကြားခွင့် ရသူတို့သည် အလွန်ဘုန်းကံကြီးမားလှ၏။ ….
အစချီတဲ့ အမှာစကားနဲ့ ပညာပါရမီအဖွဲ့ ဓမ္မစကြာ ၀တ်ရွတ်စဉ် စာအုပ်လေးဟာ ပထမတန်းတက်နေတဲ့ သမီးလေးအတွက် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ကျောင်းကိုယူသွားစရာ၊ ကျောင်းမှာ ရွတ်ဖတ်ရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မနက် ခုနစ်နာရီခွဲကနေ ဆယ်နာရီအထိ ဓမ္မစကူးလ် ဆိုတာကို တစ်မြို့လုံးရှိ မူလတန်းကလေးငယ်အားလုံး တက်ရပါတယ်။ ကျောင်းမှာ မဟုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းနဲ့ အနီးဆုံး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တက်ရတာဖြစ်ပြီး ဆရာမများက ဗုဒ္ဓ၀င်ပုံပြင်တွေ ပြောပြ၊ ပြီးတာနဲ့ ခေါင်းပေါ်ကျော်ပေး ကစားနည်း၊ အမိပင်လယ်ကစားနည်း စတဲ့ အုပ်စုလိုက်ကစားနည်းတွေသင်၊ တစ်ခါတလေတော့လည်း အရောင်ခြယ်ကြတယ်။ ဆော့လို့ဝပြီဆိုရင် ကလေးတွေအတွက် အာဟာရအဖြစ် မြန်မာမုန့်တစ်မျိုးမျိုး၊ ကြာဇံကြော် စသဖြင့် အပတ်စဉ် ကျွေးကြပါတယ်။ တကယ့်ကို အားရစရာကြီးပါ။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟာ အခြိမ်းခြောက် ခံနေရပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ အားလုံး တစ်တပ်တအားကြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတာပါ။ အပေါ်အင်္ကျီအဖြူ၊ စကတ် ဘောင်းဘီ ကြက်သွေးရောင် ၀တ်စုံတူညီ ၀တ်ထားတဲ့ မူလတန်းကလေးတွေအားလုံး ဓမ္မစကူးလ် ဆိုရင် အင်မတန်ပျော်တယ်။ မိဘက မအားလို့ လိုက်မပို့ပေးနိုင်ရင် အိမ်မှာ ဂျီတိုက်ကြတဲ့အထိ။ ” လာပါ သူငယ်ချင်းရယ် ဓမ္မစကူးလ် သွားကြမယ် ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကိုလည်း ကလေးတွေ ပါးစပ်ဖျားက မချကြ။
သို့သော် …. သို့သော် ….ဒို့မြန်မာများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်လိုက်ရင် လွန်လွန်နဲ့ ကျွံကျွံ။ အစက တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်ထဲ (တနင်္ဂနွေနေ့) ဘုရားစာ သင်တာပါ။ အခုတော့ အင်္ဂါနေ့မှာ ဓမ္မစကြာ စာအုပ်လေး ကျောင်းကို.ယူသွားပြီး ဓမ္မစကြာ ရွတ်တာ သင်ရပါတယ်။ ဥပုသ်နေ့ ကျောင်းပိတ်လို့ အစားတက်ရတဲ့ စနေနေ့မှာ ညနေ ၂နာရီခန့်ဆိုရင် ကျောင်းမှာ ထော်လာဂျီခေါ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အားလုံး ထော်လာဂျီပေါ်တက်ပြီး မိုးကုတ်ဝိပဿ နာ ကျောင်းကို မြန်းကြပါတယ်။ ဟိုမှာ တရားထိုင်နည်း သင်ပေးပြီး ခဏတဖြုတ် တရားထိုင်ကြရပါတယ်။
ထိုလုပ်ရပ်ကို စာရှုသူများ ဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲ။ ကလေးငယ်တွေကို ဒီအရွယ်ကတည်းက တရားထိုင်နည်း သင်ပေးတာ အထုံပါရမီ ပါသွားအောင် အတွက်လား။ ၀ိပဿ နာလို အဆင့်မြင့်တရားနဲ့ ကလေးပေါက်စန။ ဆင်ခေါင်းခွေးချီသလို ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရင် ရင့်သီးသွားမှာလား။ ပေါင်မုန့်ကို ငပိရည်နဲ့တို့စားခိုင်းသလို၊ လက်ဖက်ရည်ကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ခပ်သောက်ခိုင်းသလို အဆင်မပြေလှပါဘူး ဘဘုန်းတို့ရယ်။ တရားထိုင်တာ ဘယ်လိုထိုင်ရလဲ လို့ သမီးကိုမေးကြည့်တော့ သမီးက ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး မစ်ကီအကြောင်း စဉ်းစားတာပါတဲ့။
၀ိပဿ နာကိုအသာထား၊ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ ဓမ္မစကြာ ၀တ်ရွတ်စဉ်စာအုပ်ကို အစပြန်ကောက်ပါမယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ရတနာသုံးပါး ဘုရားရှိခိုး၊ စိန်ရောင်ခြည် ဘုရားပင့်၊ သြကာသကန်တော့ခန်းနှင့် ဆုတောင်း၊ ပြီးမှ ငါးပါးသီလဆောက်တည်ခြင်း၊ နတ်ဗြဟ္မာများ ပင့်ဆောင်ခြင်း၊ ဓမ္မစကြာ အမွှမ်း၊ ဓမ္မစကြာ ပါဠိတော်၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေ … စသည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ စာအင်မတန်လေးပြီး ကလေးသူငယ်များ နားလည်လောက်တဲ့ အဆင့်မဟုတ်ပါ။
အမှန်တကယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်သွားစေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပကတိတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ ဓမ္မစကြာ မြန်မာပြန် အဓိပ္ပါယ် မပါ။ အမှန်တော့ ဒီမူလတန်းကလေးတွေကို ဓမ္မစကြာ ရွတ်ခိုင်းစရာလည်း မလို၊ ဓမ္မစကြာကို ရှင်းပြစရာလည်းမလို၊ ဆရာမက ဗုဒ္ဓ၀င်ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြရုံနဲ့ ကလေးမှာ ကြည်ညို သဒ္ဓါ စိတ် အလုံအလောက် ၀င်ပါတယ်။ ” သုံး လူ့ရှင်ပင် ကျွန့်ထိပ်တင် … သောင်းခွင်စကြာဝဠာ ” အစချီတဲ့ အင်မတန် ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ ခုနစ်နေ့ ဘုရားရှိခိုး တစ်ပုဒ်နဲ့တင် သဒ္ဓါ စိတ် အပြည့်အ၀ ၀င်စေပါတယ်။
စာအုပ်ဟာ ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှု တော်တည့်မှန်ကန်အောင်၊ ဥာဏ်ရည်ဖွင့်ပေးတဲ့ ရှင်းလင်းချက် တစ်လုံးမှ မပါ။ (ဥပမာ နတ်ကိုးကွယ်မှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဟုတ်ကြောင်း။) ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမွှမ်းထုတ်နေတာ များပြီး တကယ့်အနှစ်သာရ မပါဝင်ပါ။ အလွတ်ကျက်၊ အလွတ်ရွတ်စနစ်နဲ့သွားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စာသင်ပုံဖြစ်နေပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ နဂိုကတည်းက ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း အရေအတွက် မသေးလှ။ လူမှုရေးတက်ကြွတဲ့ သံဃာတော်များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒါဟာ ဖြေရှင်းနည်း အစစ်အမှန် မဟုတ်။ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းမှသည် အစိုးရအတန်းကျောင်း စာသင်ခန်းဆီ တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ယူကာ ပညာရေးမြှင့်တင်ရမည်ဟု နားလည်ထားပါတယ်။ ယခုတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက အတန်းကျောင်းဘက် ရွှေ့မလာဘဲ အတန်းကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘက် ရွှေ့နေသယောင်ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ မူလပညာရေးစနစ်ကိုက ကဇော်သမား ဒယီးဒယိုင်နဲ့ သိုင်းကွက်နင်းသလို ဖြစ်ရတဲ့အထဲ ယခုအခါ ဦးတည်ရာပါပြောင်းပြီဆိုတော့ သိုင်းပြောင်းပြန်လို့ပဲ အမည်တပ်ရတော့မလားမသိ။
ပညာရေးရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးမြှင့်တင်ရေးကတော့ နှေးတုန်းပါ။ တကယ်လို့သာ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ယခုလို ဓမ္မစကူးလ်နဲ့ တန်းတူထားပြီး ကလေးတွေ ပျော်ရွှင်လာအောင် အာဟာရပါကျွေးပြီး သင်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ကျောင်းသားမိဘတွေပါ စိတ်ပါဝင်စားပြီး တစ်တပ်တအားလုပ်မယ်ဆိုရင် ဓမ္မစကူးလ် လိုပဲ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးလုပ်ပြီး တကယ့် ခေတ်ပညာကို ပိုမိုအာရုံစိုက်မိစေချင်ပါတယ်။
ခေတ်ပညာတွေတတ်ပြီး ဘာသာတရား အထိန်းအကွပ်မရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ….
တော်ဖို့ တတ်ဖို့ထက် ယဉ်ကျေးလိမ္မာဖို့က ပိုအရေးမကြီးဘူးလား ….
ပညာမတတ်သော ပညာရှိနဲ့ ပညာတတ်သော ပညာမဲ့ ဘယ်သူပိုမြတ်သလဲ ….
စိတ်ကောင်းရှိဖို့က ပထမ၊ စာတတ်ဖို့က ဒုတိယ မဟုတ်ဘူးလား …. စတဲ့
အပြောတွေနဲ့ ဦးနှောက်ခြောက်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့လားရှင်။ ” ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှ ” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား အခိုင်အမာ ရှိကြောင်းရယ်ပါ။
(စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃)
ဗွေဆော်ဦး ကွန်မင့်အတွက် ဗွေဆော်ဦးကျေးကျေးပါ ကိုသြကြိမ်ရယ်။
ဟိုးကတည်းက ဘာပဲ လုပ်ရမယ်၊၊ ဘာပဲလုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းနဲ့ (အုပ်ချုပ်/နေထိုင်/အသားကျ) လာကြတာကိုးးးး
ဘာသာရေးရယ်မှမဟုတ် ကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာပါ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် အရဖောက်ထွက်မယ် ဆိုရင်ကို သစ္စာဖောက်လိုလို လူထူးလူဆန်းလိုလို ဖျက်စီးရေးသမားလိုလို ထင်ကြတာဆိုတော့………..
ဘယ်နေရာမှာမှ ခရီရေးတစ်ဖြစ်တဲ့ သူမျိုးတွေ ပေါ်မလာတာလည်း အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ။
ယောနသံ စင်ရော်လေးတွေ ပေါ်မလာတော့တာပေါ့ နော်။
အဲဒါကလည်း ကျနော်တို့ နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ထဲက တစ်ကြောင်းပါပဲ။
အစိမ်းသေတွေရယ်၊ သိုင်းပြောင်းပြန်ရယ် … ခေတ်မီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကား မဝေးတော့ပြီတည်း။
မခိုင်ဇာရေ – မခိုင်ဇာ သားသမီးတွေကို ခြသေ့င်္ကျွန်းမှာ ကျောင်းထားတယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ပြောပြဦးနော်။ ဘယ်လိုကျောင်းထားတယ်၊ ဘာတွေသင်တယ်၊ သင်ရိုးတွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်လိုဒေါင်းတယ်ဆိုတာတွေ … သိချင်လို့ပါ။
ဒါ​ပေမဲ့ လမ်းမကျရင်​​တော့ ပြင်​သင့်​ပါတယ်​။
နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအရ ပေါ်ပင်ဖြစ်တဲ့ က်ိတ်စတွေနောက်ကို တတပ်တအား လိုက်နေကြတဲ့ အနေထားမှာ အလွဲလေးတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့ လက်ရှိအခြေနေက အဆိုးကြီး မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကြံဖန်ဖြေသိမ့်တွေး တွေးမိပါတယ်
ဘုရားစာရွတ် တရားထိုင်ခိုင်းတာ ရိုးအီသွားရင် နောက်တမျိုး အဆန်းထွင်ကြပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့လဲ စမ်းသပ်ခံပညာရေးနဲ့ အရိုးရင့်လာတာဖြစ်လို့ ကောင်းနိုးရာရာ စမ်းတ၀ါးဝါးလုပ်ကြည့်ကြတဲ့ အစဉ်အလာ တော်တော်နဲ့ပျက်အုံးမှာမဟုတ်ဖူးလို့ ခံစားမိပါကြောင်း
ကိုမင်းခန့်ကျော်ရေ … သူ့ကျောင်းတက်ရင် သူ့စည်းကမ်းပေါ့နော်။ တစ်မြို့လုံးဆိုတော့ ရွေးစရာမှ မရှိတာ။ အစ်မလည်း ရန်ကုန်ပြောင်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေရပြီ။ ဒါပေမယ့် နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်။ ကိုယ့်သားသမီး ကောင်းစားရုံနဲ့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကောင်းစားမသွားဘူး။ ကလေးတိုင်းရဲ့ ပညာရေး ကိုပြု ပြင်နိုင်မှ
ညီမရွှေအိ … တစ်ခါတုန်းက မခိုင်ဇာ ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မင့်လေးကိုပဲ သတိရမိတော့တယ်။ သူပေးတဲ့ကွန်မင့်က ( အစမ်းသပ်ခံ နှလုံးသား သဘောထားအကြီးဆုံး ) တဲ့။
တံခါးတော်တော်များများကို ဖွင့်နိုင်တဲ့သော့ တဲ့
ဟုတ်ပါ့ ကိုသူရရေ — သားအငယ်ကောင် ၉လသားရှိပြီဆိုတော့ သောင်းကျန်းလွန်းလို့ အစ်မလည်း လျှာထွက်မတတ်ဖြစ်နေပြီ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့ ပြောပြီး သီလမလုံ လူလူချင်း မေတ္တာမပွါးနိုင်တဲ့ သူတွေ နဲ့
ကိုးကွယ်ရာဘာသာမရှိ ဘဲ သီလလုံ လူလူချင်း မေတ္တာပွါးနေတဲ့ သူတွေ
ကို လက်တွေ့ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နေတဲ့ သူမို့ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ဘာသာ ထဲမှာ အတ္တကြီးလွန်းသူတွေကို ဘယ်လို ဝေဖန် ပြောရမလဲ တောင်မသိတော့တာကြာပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ် ဆိုစကားကြားလာရင် အတွေးတွေအများကြီးဘဲ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟာ သူ့ဟာသူ ကြိုးစားအားထုတ် ရင်း နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်တာမို့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာမရှိပေမဲ့ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ် ကို လိုက်တတ်သူ ဖြစ်ရင်ဘဲ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်သလား အမြဲ တွေးမိတာ။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။ နော။
ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာလား မသိဘူး အရီးရဲ့။
သူငယ်တန်းအရွယ် ကျမသမီးက တရားထိုင်ရင်းမျက်စိခိုးခိုးဖွင့်ကြည့်တဲ့အကြောင်း သူ့ဆရာမက
ဓမ္မစကူးမှာ မူလတန်းအရွယ်ကလေးတွေကို ပါဋိတွေရွတ်ခိုင်း တရားတွေထိုင်ခိုင်းလုပ်နေတာတွေက ပေါ်ပြူလာ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း ဖွင့်နေတယ်လို့ဘဲ မြင်တယ်ဗျ။
မိဘတွေက အိမ်နားအေးဖို့ ဓမ္မ စကူးပို့
သင်တဲ့သူက သက်သာစေဖို့ တရားထိုင်စေ အဲလိုလေ။
နန်းတော်ရာသူ၊ ကိုခင်ခ — ဓမ္မစကူးလ်တွေ တစ်ပြည်လုံးမှာ ပေါ်လာကြတာတဲ့။ ဓမ္မစကူးလ်ကို ကျမ သဘောကျပါတယ်။ လွန်လွန်ကျွံကျွံ လုပ်တာကို မကြိုက်တာ။ ခလေးကို ကျမက ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောမပြအားတော့ ဓမ္မစကူးလ်ရှိတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဓမ္မစကူးလ် ဒီအတိုင်းသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ်တိုးတဲ့ ၀တ်ရွတ်စဉ်တို့ ၊ တရားအားထုတ်ခိုင်းတာတို့ကတော့ ရယ်စရာပဲ။ အဲဒီအရွယ်ခလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတာဟာ ကြောင်ကလေး ကြွက်ကလေးအဆင့်ထက်ကို မပိုဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမသမီးလည်း တရားထိုင်ရင်း မစ်ကီမောက်စ်အကြောင်းစဉ်းစားနေတာပေါ့။ စနေနေ့မှာ ခလေးကို ကျမ ကျောင်းမပို့တော့ဘူး။ တရားထိုင်ရင် ခြင်ကိုက်မှာစိုးလို့။ ပြီးတော့ အဲဒီအလုပ်တစ်ခုလုံးကို ဘ၀င်မကျနိုင်လို့ပါ။
မပြုံးလို့ ဘဲ ခေါ်ချင်ပါတယ်..
ကိုယ့်အစ်မ တယာက်ကလည်း နာမည်က မပြုံးဆိုတော့ ပိုပြီး ရင်နီးသလို ခံစားရလို့ ပါ..။
ကျနော့်ဆီမှာ မပြုံးကွန်မန့် လာရေးဘူးတယ်နော်…ပန်းချီကို စလုပ်ပေမယ့် မရခဲ့ဘူး…။ အတွေးအခေါ်မြင့်မှ ရမယ်ဆိုလား အတိအကျတော့ မကူးရေးတော့ဘူး.. မပြုံး။
ပန်းချီသမားကျနော် အလေးအနက်ထားတာ ဒီစာထဲက အတွေးအခေါ်မျိုးပါ..။ လေးစားပါတယ် မပြုံး…။
ဒီအမြင်တွေကို ချရေးပြတာလည်း ချီးကြူးပါတယ်..။
ကျနော်တို့ တွေ ရေလိုက်လွဲနေခဲ့ကြတာကို မျိုးဆက်တွေအထိတော့ မကူးစေချင်တာ အမှန်ဘဲ မပြုံးရေ..။
ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေ အရွတ်ကိုဘဲ ကိုက်ဆွဲ နေချင်ကြတုန်းဆိုရင်တော့ ၀မ်းနည်းစရာပါဘဲ..။
အသားစားရမယ့် အချိန်ပါ…ကိုယ့်တုန်းက ကက်ဆက်ခေတ် တိတ်ခွေခေတ်တွေတုန်းထဲက အရိုးလေးကိုက်ပြီး
မြင့်မြတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထင်ခဲ့ကြတယ်… အရွတ်ကိုကိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထင်ခဲ့ကြတယ်….
အခုအချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အရွတ်လား အသားလား နားလည်သင့်နေပါပြီ..။
ဒီအချိန်ထိမှ ကိုယ်က နားမလည်ဘဲ ကိုယ့်မျိုးဆက်ကိုပါ အရွတ်ဆက်ကိုက်ခိုင်းနေဦးမယ် ဆိုရင်တော့
ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေ ရင်ထဲမှာ ဘာသားတရးတခု မကိန်းဝပ်နိုင်ပါဘူး…။
သံဃာတော်တွေရော ဆရာတွေရော နားလည်ပြီး လမ်းပြောင်းနိုင်ပါစေဘဲ ဆုတောင်းပါတယ်..။
ဘုရားရွှေချ…စိန်ဖူးတော် လု”တင်…လက်ဝတ်ရတနာကို ဌာပနာလှူပြီး လော်စပီကာနဲ့ အာပေါက်မတတ်အော်ပြနေတာကို
မပြုံးခလေးတွေ မပါပါစေနဲ့ .. ။
ရေးချင်တာတော့ အများကြီးဘဲ…. နောက်ကြုံမှ…။
ဟုတ်ပါ့ ကိုကျော်စွာခေါင်ရေ သံဃာတော်တွေကော ဆရာတွေကော လမ်းပြောင်းနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။ မီဒီယာကလည်း အော်ပေးမယ်လေ။
ကလေးတွေကိုအခုလို ဘရိန်းဝက်ရ်ှလုပ်နေတာမျိုးကို အာဏာရှင်ပရိုပဂမ်ဒါလုပ်တာတွေထက်စာရင်… အင်မတန်ပိုကြောက်တယ်..။
ဒါက.. တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို “ထိ”စေတာပဲ..။
ယူအက်စ်က.. နောက်နှစ်ကစပြီး.. ကလေးတွေဆီတားဂက်ထားတဲ့.. ပညာရေးလမ်းဖွင့်တာမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး.. ပြောတာပဲ..။
ဘုန်းကြီးတွေကို.. ကလေးပညာရေးပရိုဖြစ်အောင် မွန်းမံသင်တန်းဖွင့်.. လုပ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းရမယ့်ပုံ…. သာဓု…
သူကြီးရယ် ဘရိန်းဝပ်ရှ် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရိုပါဂန်ဒါ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုန်လုံးကို ကြောက်ပါတယ်။
အခုလို သံဃာတွေ အားကောင်းလာတာ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် မွမွမကြေခင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ ။ အာဖဂန်နစ္စတန် ဖွတ်ဖွတ်မကြေခင်က အခုလိုပဲ ဘာသာရေးသမားတွေ အင်မတန်အားကောင်းခဲ့တယ်။
ပညာရေးအမြန်ဆုံးပြင်ချင်ပါတယ်။ အစိမ်းသေတွေ များလွန်းနေတယ်။ ဒီအစိမ်းသေတွေ ဒီတိုင်းမနေဘူး။ တနေ့မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို လည်ပင်းပြန်ညှစ်လိမ့်မယ်။
ကလေးတွေဆိုတာ လိုချင်တဲ့ပုံသွင်းလို့ အလွယ်ဆုံးပဲ။
အဲဒီအရွယ်မှာ ကိုယ်ကျင့်သီလရှိဖို့ လေ့ကျင့်ပေးတာ ကောင်းပေမယ့်
သို့သော် …. သို့သော် ….ဒို့မြန်မာများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်လိုက်ရင် လွန်လွန်နဲ့ ကျွံကျွံ ဆိုတော့ကာ…………
တစ်ခေါက်ပြန်လာဝင်ကြည့်တာပါ အနီများတွေ့မလားလို့ အမရေ။
ကဗျာပြခန်း ၈ မှာတော့
အနီတွေကို အောတိုက်နေတာပဲ လေးခ ရေ
တခြားဘာသာကြီးတွေက ဘာသာဝင်တွေ.. သွားကြတယ်ဆိုတာ.. အဲဒီချခ်ျ/ဗလီ/ဘုရားကျောင်းမှာ.. ဆိုင်ရာဘာသာရေး၊လူမှုရေး၊နိင်ငံရေးတွေတိုင်ပင်.. ဆွေးနွေး..မေးမြန်း.. အဖြေရှာကြတာ..။
တယောက်ကပြော/ဟော ဆုံးမဆရာလုပ်တာကို.. လူအုပ်ကြီးက.. စောကတမတက်ရဲ.. ထိုင်နားထောင်ပြန်ရတာမဟုတ်သလို.. ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းနေတာလည်း မဟုတ်ပေဘူးလေ..
မြန်မာတွေဘာလုပ်သင့်သလည်းဆိုတော့.. ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုမဆို…တန်းတူ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့.. မေးခွန်းထုတ်.. ဆွေးနွေး.. စောကတတက်နိုင်မှုပါပဲ…လို့ယူဆပြောလိုမိပါတယ်..။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာ ၂ပိုင်းရှိတယ်။ အသေနဲ့အရှင်ပေါ့။ ဥပမာပြောရရင် geometry ,Trigo ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်တွက်နိုင်ဖို့အတွက် သီအိုရီကိုအသေကျက်ရတယ်။ အဲဒီသီအိုရီကို ကြေညက်မှ တွက်ရမဲ့ပုစ္ဆာကို ဆက်စပ်စဉ်းစားနိုင်မယ်။ သီအိုရီကိုမတတ်ပဲ သီအိုရီသင်တဲ့ဆရာကိုဇောဒကတက်ပြီး ကိုယ်ထင်သလိုတွက်ပြီးဇွတ်ငြင်းနေရင် အဖြေမှန်နဲ့ လွဲချော်နေမှာပဲ။
နောက်ဥပမာတခုပြောရရင် မုဒိမ်းမှုတွေလျှော့နည်းသွားဖို့ ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို ပြဌာန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပေါ်ထွက်ခဲ့ဘူးတယ်။ ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကိုပြဌာန်းခြင်းဟာ မုဒိန်းမှုကို လျှော့နည်းစေသယောင်ရှိပေမဲ့ တခြား side effect တွေများပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်။
မုဒိန်းမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ။ ကာမဂုဏ်ခံစားချင်တဲ့စိတ်ပြင်းထန်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ ကာမဂုဏ် ဘာဖြစ်လို့ခံစားချင်လဲ ကောင်းလို့ပါလို့ဖြေမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလဲ? ထေရ၀ါဒ တရားသဘောအရ အဆုံးအမနဲလို့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဒုသနသော ဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမသိလို့ပါပဲ။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ၊ ဒုသနသောကို လေးနက်စွာယုံကြည်သူတယောက်ဟာ သင်္ချာသီအိုရီကို ကြေညက်စွာ ရထားသူတယောက်လို မုဒိန်းမှုဆိုတဲ့ပြဿာနာကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားသွားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေနဲပါးစေဖို့ ပြည်သူတွေကိုရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံ တဲ့စိတ်ဓါက်မျိုးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ စာရိတ္တဆိုတာမျိုး စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်အောင် အများအကျိုးဆောင်ကိုယ့်အကျိုးအောင် စိတ်ဓါက်မျိုး တွေလေ့ကျင့်ပေးဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစာအလွယ်ဖတ်နည်း ၂စောင်တွဲ ၅စောင်တွဲ ၁၀စောင်တွဲတွေကိုလည်း ပြန်လည်သင်ကြားသင့်ပါတယ်။ သင်တဲ့နေရာမှာလည်း လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ဆက်စပ်ပြီး အသုံးချနိုင်အောင် ပါမောက္ခဆရာတော်ကြီး ရှင်းပြသလိုမျိုး ရှင်းပြနိုင်အောင် ဆ၇ာတွေကို အရင်ဆုံး သင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသူကြီးကားဝေး ဟု မည်သူဆိုလေသနည်း။
တိုင်းပြည်တိုးတက်မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေ နည်းပါး။ ပြည်သူတွေ ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံမယ်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပညာရေးမြှင့်ရပါမယ်။ စလုံးဟာ ချမ်းသာလို့ ပညာရေးကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ ပညာရေးကောင်းလို့ ချမ်းသာလာတာပါ။ ကျောင်းတွေမှာ ခုဆို စာရိတ္တ သင်ပေးနေကြပါပြီ။ မပြုံးတို့ ထောက်ခံပါတယ်။ ဘာသာရေးကို တအားမလုပ်စေချင်တာပါ။ လမ်းလွဲနေပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ပေါက်စမလေးတွေ တရားထိုင်ရင်း ဆရာမ လစ်တာနဲ့ တခိခိရယ်နေကြပါရော။ သူတို့ လုံးဝ နားမလည်ကြပါ။
ကိုနေချား ပြောပြတဲ့ အသေနဲ့အရှင် ပညာရေး ၂ပိုင်းကို ထောက်ခံပါတယ်။
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စင်္ကာပူကျောင်းတွေမှာဆို ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းစရောက်ရောက်ခြင်းကျောင်းကို တစ်ပတ်ပြေးရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဝေးလဲတော့မသိပါ။ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းရောက်အောင်မပြေးနိုင်ရင်ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ နောက်တစ်ပတ် ထပ်ပြေးရပါတယ်။ ချွေးသံတွေနဲ့ ဘယ်လိုစာသင်လဲတော့ မသိပါ ။ ရေကူးလဲသင်ပေးတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ကာယအား ဥာဏအား ၂မျိုးစလုံးကို လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းကတည်းက နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ဥပဒေရေး ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောတရား ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကို အတိုချုပ် တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ နားသွင်းထားပေးသင့်ပါတယ်။
ငယ်စဉ်က တရားအလုပ်တွေချည်းပဲလုပ်လို့ လောကမှာရပ်တည်လို့မရဘူးလို့ ။တရားကို အရမ်းလုပ်ရင်ပျော့ညံ့တဲ့လူညံ့တယောက် ကံကိုယုံပြီးထိုင်စောင့်နေရင် ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အယူမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကံကိုယုံရမယ်လို့ ဘုရားက ဟောခဲ့တာကိုး။
တရားဆိုတာ လောကီတရားနဲ့ လောကုတ္တရာတရားဆိုပြီး ၂မျိုးကို ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက လောကမှာ အတတ်ပညာမရှိရင် ရပ်တည်လို့မရလို့ မင်္ဂလာသုတ်မှာ လူ့ဘ၀မှာ အသက်မွေးအတတ် တခုခုကို ရှာဖွေဖို့ တတ်မြောက်ဖို့ လိုတယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။ ကံကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ် ။ ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်။ ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ ကံကိုယုံတယ်ဆိုပြီးကံကောင်းတာကိုထိုင်စောင့်နေဖို့မဟုတ်ပါ။
… ပေါက်စမလေးတွေ တရားထိုင်ရင်း ဆရာမ လစ်တာနဲ့ တခိခိရယ်နေကြပါရော။ သူတို့ လုံးဝ နားမလည်ကြပါ။…
ငယ်ရွယ်သူတွေမို့နားမလည်နိုင်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးတာတောင်မှ နားမလည်သူတချို့ရှိတာသေးတာပဲ။ ဒီအလေ့အကျင့်လေး လုပ်ထားဖူးရင် ပါရမီရှိသူတချို့ (သို့) အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရာခိုင်နှုန်းတခု လောက်ပဲရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာ တရားထိုင်တာထက် လောကီကြောင်းကျိုးတရားတွေကို သင်ပေးတာ ပိုအကျိုးများမယ်ထင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာသုတ်ကို ရွတ်ဆိုဖို့ထက် ကျင့်ကြံရင်ပိုအကျိုးများပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာ မင်္ဂလာသုတ်ကို အလွတ်ရ ရွတ်ဆိုနေကြပေမဲ့ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု မရှိသလောက်နဲပါးကြပါတယ်။ မင်္ဂလာသုတ်ဟာ ရွတ်ဆိုရုံနဲ့တင်အကျိုးများတယ်ဆိုပေမဲ့ လိုက်နာ ကျင့်ကြံရင် ရွတ်ဆိုတာထက် အဆပေါင်းများစွာအကျိုးများပါတယ်။
ထေရ၀ါဒဗုဒဘာသာကိုသင်ကြားမှု မှန်ကန်စံနစ်ကျမှုမရှိရင် အယူလွဲပြီး ကံကိုယုံပြီး ကံကောင်းတာကို ထိုင်စောင့်နေတတ်တဲ့ လူပျော့လူညံ့တယောက် ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ခုတက်လာမယ့် ခလေးတွေအတွက် ပညာရေးကို ကျမလည်း တော်တော်စိတ်ပူပါတယ်။ စိတ်ထဲအမှန်ရှိတာ ပြောရမယ်ဆို၇င် ဘာသာရေးကို လုံးဝမလုပ်စေချင်ပါ။ အဲဒီလို ဒဲ့ပြောရင် လူများစု လက်ခံနိုင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မျှမျှတတလေး ရေးတာပါ။ ဒီမိုကရေစီအရ လူများစုရဲ့ သဘောထားကို လိုက်နာရမှာမို့ ခလေးတွေ ဘာသာရေးသင်တာကို လက်ခံပါတယ်။ တကယ်အမှန်က ခေတ်ပညာကိုပဲ အနောက်စံချိန်မီ သင်စေချင်တာ။ စင်ကာပူကိုတောင် သိပ်သဘောကျတာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တိုင်းလည်း မဖြစ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် လျှော့ထားပါတယ်။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ .. ဒုသနသော ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်သိကြသလည်းတော့မသိ…
မြန်မာပြည်ဟာ.. ကမ္ဘာတန်းမှာ..မုဒိမ်းမှုနဲ့.. လင်ငယ်/မယားငယ်အများဆုံးတနိုင်ငံလို့တော့.. အချက်အလက်အရကောက်ရင်.. သိနိုင်ပါတယ်..
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ… ဒုသနသော ကို.. ဖွင့်ချက်ပဲမှားသလား.. ဆရာ/တပည့်တွေကပဲ.. တော်လွန်း(ရွဲ့ပြောတာ) နေသလားတော့မသိ..
ဒါမျိုးဖြစ်တာကလည်း.. ဒီစနစ်တခုထဲအောက်မဟုတ်.. နှစ်ရာချီ…
အချက်အလက်နဲ့… ရလဒ်ကြီးမြင်နေရက်နဲ့.. အတင်းထပ်တွန်းလုပ်တော့.. ပိုဆိုးတာတွေမြင်ရတော့မပေါ့..ကိုရင်ရယ်..
ကလေးတွေဆိုတာ.. နုနုထွတ်လေးတွေပါ…။ အပျိုစင်..လူပျိုစင်တွေလို့လည်း.. ပြောလို့ရသပ…။ ကြောက်လည်းကြောက်တတ်သလေ..။
ဆရာကပြောရင်..ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း.. လုပ်သေးသဗျ..။ နှိပ်ပေးဆိုလည်း.. နှိပ်ပေးတာပဲ..။
ဒီလိုကလေးတွေကို… ဘာသာရေးပုံ.. ယုံ… “အပ်ရဲသူ”များ စိတ်ကို.. အံ့သြမိကြောင်း…
ဒေါင်ဒေါင်ဒေါင်..( ခုတလောရလိုက်တဲ့.. သတင်းအချက်အလက်တခုကို.. ကိုင်၍ ခေါင်းလောင်းခေါက်ခြင်း…. )
Iowa Youth Pastor Rapes Boys To ‘Cure’ Them Of Homosexuality …
3 days ago – Have you heard of the Iowa youth pastor who is walking free after confessing to raping boys to ‘cure’ them of homosexuality?
Pastor Accused Of Sexual Abuse Of 14-Year-Old Foster Daughter …
Aug 26, 2013 – Darryl Houston, 47,aHouston pastor, has been accused of sexually assaulting his foster daughter.
…ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ… ဒုသနသော ကို.. ဖွင့်ချက်ပဲမှားသလား..
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာမမှားပါဘူး။ အဆုံးအမ ကိုလိုက်နာခြင်းအားနည်းတာကမှားနေတာပါ။ …..အချက်အလက်နဲ့… ရလဒ်ကြီးမြင်နေရက်နဲ့ အတင်းထပ်တွန်းလုပ်တော့.. ပိုဆိုးတာတွေမြင်ရတော့မပေါ့..ကိုရင်ရယ်…..
ရလာဒ်က ဆုံးမခြင်းကို မလိုက်နာလို့ ဆုံးမသွင်သင်မှုနဲလို့ ရလာတဲ့ရလာဒ်တခုပါ။ ဆုံးမသွင်သင်မှုကို လိုက်နာတဲ့သူတွေများရင် ရလာဒ်ကသိသာလာပါလိမ့်မယ်။
ဆရာကဆုံးမတယ် ။တပည့်က မလိုက်နာဘူး။ ရလာတဲ့ရလာဒ်က မကောင်းဘူး။ ဆရာရဲ့ဆုံးမမှု မှားတယ်ပြောရမလား ဆုံးမသွင်သင်မှုအားနည်းတယ်ပြောရမလား။
ဖွဘုတ်မှာ ကလေးတွေ တရားထိုင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံကို ရှယ်တဲ့ သူတွေဆီမှာ အမရဲ့  ပိုစ့်ကို ပြန်ရှယ်ပေးခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးပါနော်။ ချစ်စရာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ လူတွေကြည့်ပြီး တွေးတာလွဲကုန်မှာ စိုးရတယ်။ ပို့စ်ကို ပြန်ရှယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ တကယ့်အမှန်က ဓာတ်ပုံတွေ ထဲကလို မဟုတ်ဘူး။ ခလေးတွေ တရားထိုင်တာကို ဘာမှ မသိပါ။
အခြားနေရာတွေတော့ မသိဘူးဗျ၊ စလုံးကျွန်းက Jurong East MRT နားက ဗလီတစ်ခု မှာတော့ ခေါင်မိုးထပ်လိုဟာလေးမှာ ကလေးတွေ အတွက် ကစားကွင်းသေးသေးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဗျ။ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ ဆိုရင်တော့ အများစုက ငြိမ်ငြိမ်နေရတာကိုး၊ ကလေးတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သိပ်သွားချင်ကြမယ် မထင်။ အမှတ်မမှား ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထွက် ကလေးတွေ မကစားရတဲ့ ဟာမျိုးကို စာရေးဖူးတယ်ထင်တယ် ခင်ဗျ။